Ixabiso leXabiso leXabiso leXabiso elinokuKhulisa njani ukuSebenza kweShishini | Martech Zone
Njengokuba umhlaba wale mihla ubeka ukwanda kokubaluleka kwisantya kunye nokuguquguquka, ukubanakho ukufaka ixesha langempela, amaxabiso afanelekileyo kunye nesikhokelo sokuthengisa kwiindlela zabo zokuthengisa zinokunika amashishini isandla esiphakamileyo kukhuphiswano xa kufikwa ekuhlangabezaneni nokulindelwe ngabathengi. Ewe kunjalo, njengoko iimfuno zentsebenzo zisonyuka, kunjalo nobunzima beshishini.
Iimeko zentengiso kunye neenguqu kwishishini ziyatshintsha ngesantya esikhula ngokukhawuleza, zishiya iinkampani zisokola ukuphendula kwizinto ezibangela amaxabiso - izehlo ezinje ngokutshintsha kweendleko, amaxabiso, ukhuphiswano lwamaxabiso, ubume bempahla, okanye nantoni na efuna utshintsho lwamaxabiso- ngokukhawuleza, ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Nje ukuba kuqikeleleke kwaye kulawuleke, izinto ezibangela amaxabiso zenzeka rhoqo ngakumbi.
Ngo-2020, abathengi be-B2B balindele nje amava anje ngabathengi kubaxhasi babo beshishini-ngakumbi ngokubhekisele kwixabiso. Ngaphandle kobunzima bexabiso le-B2B, abathengi balindele ukuba amaxabiso abonakalise ngokuchanekileyo iimeko zentengiso, zilungile, zilungiselelwe kwaye ziyafumaneka kwangoko-nkqu nakwiikowuti ezinkulu.
Ukuthembela kwiindlela zelifa lokuseta amaxabiso kusebenze kuphela ekuhlanganiseni iziphumo ezibi zokungena kwamaxabiso. Endaweni yokuba, iinkokeli ezinombono kufuneka zicingisise ngeendlela zazo zokuhambisa amaXabiso aThengiswayo.
Amaxabiso entengiso yeXesha lokwenyani ngumbono wamaxabiso onamandla kunye nesayensi. Ngokungafaniyo nezinye iindlela eziguqukayo zamaxabiso, ayipheleli kwimithetho ezenzekelayo; iyaphendula ngokukhawuleza, kodwa ngendlela ekrelekrele.
Kule nqaku, ndiza kukuhamba ngamatyala amabini okusetyenziswa kweXabiso leXabiso leXabiso leXesha-kwi-eCommerce nakwixabiso lokuvunywa kokuhamba kwee-odolo- kwaye uxoxe ngendlela yokucinga kwakhona ukuba imeko ikulungele njani ukusebenzela ishishini lakho kunye nokunyusa ukusebenza kweshishini.
Amaxabiso entengiso yeXesha leXesha kwi-eCommerce -Yintoni kwaye kutheni uyifuna
Ukuqinisekisa ukuba amaxabiso aqhuba kakuhle ngokwaneleyo kumajelo emveli ngumceli mngeni ngokwawo; iinkampani zolulwe ngakumbi ngokungena kwe-eCommerce.
Eyona mibuzo icinezelayo ndiyiva kwiinkokeli zeenkampani ze-B2B xa kufikwa kwisisombululo esomeleleyo se-eCommerce sinxulumene namaxabiso. Imibuzo ibandakanya:
Ngawaphi amaxabiso ekufuneka eboniswe kubathengi kwi-Intanethi?
Ndingahlulahlula njani ixabiso elaneleyo lokuhlonipha ubudlelwane obukhoyo babathengi?
Kuthekani ukuba amaxabiso endiwabonisa kwi-intanethi angaphantsi kunoko abathengi bam bebekuhlawula?
Ndingalisebenzisa njani ixabiso elifanelekileyo elihenda ngokwaneleyo ukuba umthengi omtsha aqale ukwenza ishishini nam ngaphandle kokuncama umda omninzi?
Ngaba amaxabiso am akwanele ukuthengisa izinto ezintsha kubathengi, ngaphandle kokuthetha nomthengisi okanye ukufuna ukuxoxa?
Yonke le mibuzo ingaphezulu kokufanelekileyo, nangona kunjalo, ukusombulula enye wedwa akunakukunika ukhuphiswano lwexesha elide kwesi sitishi sibalulekileyo. Endaweni yoko, amaxabiso eCommerce kufuneka abe namandla ngokwenyani. Ixabiso elinamandla - Ngelixa into ye-buzzword-kuthetha ukuba abathengi bakho babona amaxabiso afanelekileyo kwiimeko zentengiso ngalo naliphi na ixesha elinikiweyo ngexesha. Ngamanye amagama, Amaxabiso entengiso yeXesha leXesha.
Ngelixa inkcazo ilula, ukuyiphumeza ayisiyiyo ngqo. Ngapha koko, amaxabiso entengiso yexesha lokwenyani kwi-eCommerce ayinakwenzeka xa izixhobo ekuphela kwazo kwibhokisi yezixhobo zakho sispredishithi sendabuko kunye nemithombo yedatha eyahlukileyo ekhula inde ngaphambi kokuba ihlalutywe, kungasathethwa ke ngayo.
Endaweni yoko, amaxabiso abathengisi besoftware banokukunceda usete amacebo e-discrete kodwa ngaxeshanye kwi-intanethi afezekise iinjongo ezininzi zeshishini, ngelixa unikezela abathengi amaxabiso abalindeleyo ngaphandle kwexesha lokushiyeka.
Ityala elinye lokusetyenziswa kwe-eCommerce lisebenzisa idatha ekhethekileyo ekhompyutheni njengokujonga iphepha, ukuguqula, ukulahla inqwelo kunye nokufumaneka kwezinto ukuseta iindlela ezininzi zokuphungula amaxabiso eCommerce. Umzekelo, uluhlu oluphezulu lweempahla kunye nokujonga iphepha ngokuguqula okuphantsi kunokubonisa ukuba ixabiso liphezulu kakhulu. (Kukho loo nto ibangela amaxabiso!)
Ukusetha izicwangciso zesaphulelo esilumkileyo kulula ngokungapheliyo ngale ndlela, evumela umsebenzisi ukuba angene ngokulula kwaye ahlalutye iiseti zedatha eyahlukileyo, kodwa ahlengahlengise ikhefu lesaphulelo kubhabho. Umzekelo, ukuseta ngokukhawuleza isaphulelo samaxabiso sama-30 eepesenti kwixabiso leeyunithi ezingama-20 xa idatha ibonisa amaxabiso aphezulu kakhulu ukuba ungahambisa uluhlu. Xa idityanisiwe nge-API yokufumaneka okuphezulu, amaxabiso amatsha okanye izaphulelo zinokuhlaziywa kwangoko kwisitishi sakho se-eCommerce.
Ukongeza ekumiseleni amaqhinga amaninzi esaphulelo, amaXabiso oThengiso lweXesha langempela kwi-eCommerce avumela iinkampani zeB2B ukuba:
Umahluko wamaxabiso kubathengi abasele bekhona kunye nabatyeleli abatsha kwinqanaba lemveliso okanye kwinqanaba leSKU
Cwangcisa izaphulelo ezikhethekileyo ze-eCommerce ezinokuthi zibe zezakho (okanye ekujoliswe kuzo) kumacandelo abathengi kunye namaqela emveliso
Nika amaxabiso esivumelwano somthengi ngokuthe ngqo kunye namaxabiso ashukumayo akumgangatho wobungakanani kwikhefu kwi-Intanethi
Hlanganisa ukuqiniswa kwexabiso ngokusekwe kwi-elasticity, ukuqinisekisa ukungqinelana kwexabiso le-omnichannel elifezekisa ingeniso kunye neethagethi zomda zeshishini
Ukutshintsha ukusuka ekuphenduleni, kwiinkqubo ezinobunzima kufuna ukucinga ngendlela eqhubayo, ehambelana nedatha yesayensi yokuhambisa amaxabiso eXesha leXabiso. Ngokwenza njalo, amashishini anokuxhotyiswa ngcono ukuhlangabezana nokulindelweyo kwabathengi kwi-intanethi.
Amaxabiso exeshana leXabiso leMarike aPhucula iiMali kunye neziPhumo zokuSebenza
Ngapha koko, izibonelelo ezifanayo zeXabiso leXabiso leMarike yeXesha leKhomishini zandiswa ngokulula kwezinye iinkqubo zokuxabisa kunye noku-odola ngaphakathi kwenkampani ye-B2B. Xa amaxabiso ashukumisayo, aphuculweyo eziswa nge-API eqhuba kakuhle, isibhakabhaka ngokuqinisekileyo ngumda xa kufikwa kwiindidi zeengxaki onokuzisombulula ngexesha lokwenyani.
Umxhamli ophawuleka ngokwamaxabiso exesha lokwenyani lixesha elide ngumthengi weZilliant uShaw Industries Group Inc., umboneleli womgangatho womhlaba osebenza ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi zeerandi 'yengeniso yonyaka kunye nezigidi zemigca yamaxabiso abathengi.
I-Shaw isebenzisa ukubanakho kwamaxabiso ukuqinisekisa ukuba ii-odolo zayo ziyahambelana namaxabiso ekuvunyelwene ngawo ngexesha-lokwenyani, emva koko ziwahambisa kumamkeli (okanye) oluchanekileyo ngokusekwe kumanqanaba okuvunywa esinokuthi sitshintshe ngokulula. Ukuba kuye kwafunyanwa nakuphi na ukungahambelani kwamaxabiso, iodolo ithunyelwa ngqo kwindawo efanelekileyo yokunxibelelana ukuze ivunywe okanye ilungiswe kwangoko. Ukusebenza kwesoftware kuye kwenza ukuba uShaw akwazi ukuqhubekeka ngempumelelo kwizicelo eziyi-15,000 ngosuku, kwaye enze utshintsho kumgangatho wokuhamba komsebenzi kunye namanqanaba okuvunywa ngokukhawuleza nangokulula. Ezi ntlobo zotshintsho zithathe iiveki okanye iinyanga ukuba zichaphazele inkqubo yethu endala.
UCarla Clark, uMlawuli wecandelo lokuPhuculwa kweRhafu kwiiShishini zeShaw
Ukongeza kwintsebenzo efanelekileyo kwiXabiso leXabiso leXabiso leXesha eliNako linokuvumela, iinkampani ze-B2B zikwanyusa kakhulu ingeniso kunye nemida ngelixa lihambisa amava alungiselelwe abathengi abalindeleyo.
Ixabiso leXabiso leXabiso leXesha le-eCommerce okanye amanye amajelo kufuneka afumaneke ngoko nangoko, amaxabiso alungelelanisiweyo ahambelana kuzo zonke iindlela kwaye abonisa ngokuchanekileyo iimeko zangoku zentengiso kunye nobudlelwane kubathengi. Kuya kufuneka ihanjiswe kwangoko, nokuba kukwizicelo ezikhulu zokucaphula, kungekho xesha lisaleleyo ngexesha lothethathethwano. Ukongeza, isisombululo sokuba sibe namandla kwaye sibe lixesha lokwenyani, kufuneka:
Bonisa ixabiso langoku lemarike elibaliweyo kunye / okanye elilungiselelwe ngokuchasene neendidi ezahlukeneyo zezimvo
Sebenzisa idatha ethe kratya evela kwimithombo eyahlukeneyo, engenamda ngobukrelekrele
Hambisa amaxabiso ahambelana nesicwangciso kuwo onke amajelo ngexesha lokwenyani
Ngokuzenzekelayo ukwenziwa kwemvume, uthethathethwano, ukuphikiswa
Hambisa izindululo zokuthengisa kunye nokuthengisa okuphezulu
Ukuze ufunde kabanzi malunga Amaxabiso entengiso yeXesha lokwenyani ohambisa amaxabiso afanelekileyo, akrelekrele kunye nexabiso elifanelekileyo kwimarike ngesaziso somzuzwana, funda isibhengezo sikaZilliant:
Amaxabiso exesha lokwenyani kurhwebo lwe-E
tags: UCarla Clarkamaxabiso anamandlaamaxabiso akrelekreleXabisoAmaxabiso entengiso yexesha langempelaIxabiso leXabiso leXabiso leXesha le-eCommerceAmaxabiso exesha langempelaUkulungiselela ingenisoamashishini e-shawzilliant
Iindlela ezi-5 zokomeleza inkqubo ngaphandle kokubeka esichengeni ubuGcisa